Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » घर कता फर्काएर बनाउदा राम्रो, केके हुन् शुभ-अशुभ ?
घर कता फर्काएर बनाउदा राम्रो, केके हुन् शुभ-अशुभ ?
वास्तुमा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पाँच तत्व हुन्छन् । जसरी पाँच तत्वले शरिर बनेको छ, त्यसरी पाँच तत्वले सराचल जगत बनेको छ । पृथ्वी गोलो छ, यो पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आफ्नै गतिमा घुम्छ । जल जीवन हो । यसको प्रभाव प्रत्यक्ष हाम्रो मानव जीवनमा छ ।
वनस्पती र जीवजन्तुमा पनि प्रभाव छ । तेज भनेको ताप हो । जबसम्म तातोपन हुँदैन, प्रकृति नै हुँदैन । उर्जाका लागि तेज चाहिन्छ । वायु भनेको प्राण हो । जीवन जिउन खुलापन चाहियो । आकाश भनेको खुलापन हो ।
यि पाँच तत्वको सन्तुलन कम्पिलिट वास्तुशास्त्र हो । यसको सन्तुलन मिलाएर प्रकृतिसँग मेलमिलाप गरेर बस्नु नै वास्तुशास्त्र हो । प्रकृतिसँग मानव जीवनको मेलमिलाप हुन्छ । प्रकृतिको सिद्धान्तसँग तालमेल मिलाएर बस्नु नै वास्तु विज्ञानको प्रयोग गर्नु हो ।
वास्तु सम्पूर्ण उर्जाको सन्तुलनको विज्ञान पनि हो । वास्तुका विविध आयाम हुन्छन्, जस्तै– पर्यावरण वास्तु, गृहवास्तु, कलावास्तु आदि । वास्तुशास्त्र भित्रकै विशाल र व्यापक क्षेत्रभित्र पर्ने एउटा शास्त्र हो, निर्माण । घर निर्माण यसैमा पर्छ ।
वास्तुशास्त्रमा पूर्व–दक्षीण कुनालाई आग्नेय कोण भनिन्छ । त्यो अग्नीको ठाउँ हो । त्यहाँ अग्नीसँग जोडिएको भान्छाकोठा, ग्याँस, चुलो र प्रविधिसँग जोडिएका जेनेरेटर, इलेक्ट्रिक डिभाइस लगायत जतिपनि सामाग्री हुन्छन् त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जसबाट सकारात्मक ऊर्जा आउँछ । घरमा पूर्व फर्किएर पकाउने गरि भान्छाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
घर बनाउने सम्बन्धमा भुगोलअनुसार पाँच खालको वस्तु छ । हिमाली क्षेत्रमा घर बनाउने वास्तु अलग छ । पहाडी, समतल भुभाग, समथर मैदान (तराई)मा घर बनाउने वास्तु अलग छ । पृथ्वीका पाँचवटा तह छ ।
काठमाडौंजस्तो मध्यपहाडका समथर भागमा घर दक्षिण पूर्व फर्किएको राम्रो मानिन्छ । किनभने, घामको स्रोत दक्षिणबाट आउँछ । अत्यन्तै गर्मी हुने तराई भेगमा उत्तर फर्काएर घर बनाउन सकिन्छ । तराईमा दक्षिण पूर्व फर्काएर घर बनाउँदा झन बढी गर्मी हुन्छ ।
घर बनाउनुअघि वास्तु नक्सा हेरेर बनायो भने त्यो घरमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह हुन्छ । घरको जग हाल्दा नै पाँचवटा कलश गाडेर, धातुको कछुवा राखेर, पञ्चकलशको पूजा गरेर, पञ्चशिला राखेर शिलान्यासलाई विधिवत् वास्तुशास्त्रअनुसार अगाडि बढायो भने त्यसको सकारात्मक प्रभावले जीवनमा आनन्द, सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्ति हुन्छ ।
काठमाडौंट्वान्टिफोर डट कममा प्रकाशित सामग्रीबारे तपाईसंग कुनै सुझाव, सूचना तथा गुनासो भए हामीलाई kathmandu24online@gmail.com मा पठाउनुहोला । नेपालहोम्सबाट ।